Izindaba - Isifundo: Ukukhula kwesidingo sokudla okonakalayo kubangela ukukhula emakethe ye-IQF
Ukutadisha: Ukukhula kwesidingo sokudla okonakalayo kubangela ukukhula emakethe ye-IQF
Ubuchwepheshe bokuqandisa / izithelo eziqandisiwe / izitayela ezibandayo zezithelo / izithelo nemifino efriziwe / imifino efriziwe / izitayela zemifino efriziwe / amaqhwa asheshayo-ngawodwa / Izimakethe nezimakethe
Ukukhula kwemakethe kuqhutshwa futhi nesidingo esikhulayo sabathengi semikhiqizo yokudla ebolayo, ukudla okulula nokusetshenziswa kakhulu kwezithelo nemifino engeyona yesizini.
Imakethe yomhlaba jikelele yokuqandisa ngokushesha (IQF) yalinganiselwa ku- $ 14.77 billion ngo-2016, futhi kulindeleke ukuthi ifinyelele ku- $ 20.82 billion ngo-2022, ku-CAGR ka-5.9% ngesikhathi sesimo sezulu, ngokusho kombiko okhishwe ngabakwaMarketsandMarkets, eNew York.
Ukwanda kokusetshenziswa kwezithelo nemifino eyomiswe yiqhwa nokusetshenziswa kwe-IQF kweminye imikhiqizo yokudla yizinto ezimbili ezibalulekile ezethula amathuba okukhula kubadlali bezimakethe abahlukahlukene ezifundeni ezinjengeNyakatho Melika naseYurophu.
Ukukhula kwemakethe kuqhutshwa futhi nesidingo esikhulayo sabathengi semikhiqizo yokudla ebolayo, ukudla okulula nokusetshenziswa kakhulu kwezithelo nemifino engeyona yesizini. Ngenxa yokwanda kwesidingo semikhiqizo enjalo yokudla, abakhiqizi bagxile ekwakheni izitshalo ze-IQF ezindaweni ezahlukahlukene futhi basebenzise ithuba lapho kunesidingo esikhulu semikhiqizo ngezikhathi ezingekho.
Kodwa-ke, inselelo enkulu abakhiqizi ababhekene nayo yimfuneko ephezulu yemali esigabeni sokuqala sokufakwa kanye nemithetho kahulumeni ephathelene nokukhishwa kwamagesi abamba ukushisa ngabakhiqizi bokudla.
Ingxenye ye-cryogenic kulindeleke ukuthi ikhule ngezinga eliphakeme
Ukuqhwa kwe-cryogenic kuvame ukusetshenziselwa imikhiqizo ye-IQF, njengamaphiko enkukhu ngamanye, uphizi ofriziwe noma ezinye izinto zokudla ezihlanganisiwe ngobuningi lapho kubalulekile ukugcina izingcezu ngazinye.
Amafriza e-Cryogenic anciphisa izinga lokushisa ngokusetshenziswa okuqondile kwe-liquid nitrogen noma i-carbon dioxide ngaphakathi kwendawo ebiyelwe equkethe umkhiqizo wokudla. Njengamanje, ubuchwepheshe be-cryogenic buhlinzeka ngezinzuzo ezimbalwa, kepha budinga inani elikhulu lamafriji. Kuphinde kukhethwe lapho isikhala sinqunyelwe noma njengezindlela eziphansi zokuthola umkhiqizo omusha emakethe ngokushesha.
Isidingo esandayo sezithelo nemifino ye-IQF
Ukwanda kokuqwashiswa kwabathengi mayelana nezinzuzo zezempilo zezithelo nemifino kukhulise isidingo semikhiqizo emisha nefriziwe emakethe yomhlaba. Ubuchwepheshe obusha buhlinzeka ngokucutshungulwa okusheshayo nokunemba kwezinga lokushisa, kanye nezinzuzo zenhlanzeko.
Eqinisweni, izimakethe ezisafufusa ezifana neRussia, India kanye namazwe aseLatin America zinamandla amakhulu ezithelo nemifino efriziwe ngenxa yamazinga aphansi okutholwa.
Ukukhula kwemishini yokuqandisa ukudla kuqhutshwa yisidingo esandayo semikhiqizo efriziwe efana nebhikawozi, izithelo, inyama kanye nokudla kwasolwandle.
Izimakethe ezisafufusa yimingcele emisha yokukhula
Esifundeni sase-Asia Pacific, iChina neNdiya kulindeleke ukuthi kube yizimakethe ezikhula ngokushesha kakhulu. Isifunda sibe nesabelo sama-21.1% emakethe ye-IQF yomhlaba wonke yezithelo zemifino ye-abd. Ukukhula kwesidingo kule makethe kubangelwe ukufuduka kwamadolobha ngokushesha, ukukhuphuka kwenani labantu abasemazingeni aphakathi kanye nomholo ophakeme womthengi ngamunye. Ukwanda kwemali engenayo yabathengi sekuholele ekwandeni kwemali esetshenziswayo kumikhiqizo yokudla efriziwe. Isidingo sabathengi sokudla okubandayo nokubandayo siyanda futhi siyathandwa phakathi kwesizukulwane esisha emnothweni osafufusa.